Ukhale ngabaqola ngegama lakhe, wakhipha imininingwane eqondile uZola
USEKHIPHE imininingwane eqondile uZola 7 kulandela ukuthi sekukhona abaqola abantu ngemnikelo Isithombe: INSTAGRAM
Bongiwe Zuma | March 14, 2022
UKHATHAZWA ngasebeqola abantu abazama ukulula isandla umculi wakuleli othandwa abaningi. UBonginkosi "Zola 7" Dlamini ungomunye wosaziwayo abangaconsi phansi kubalandeli kulandela uhlelo ayelwenza lokusiza umphakathini. Emva kwezindaba zokuthi akaphilile, abantu abaningi balule isandla.
Selokhu kwaqala iCovid-19, abantu baseNingizimu Afrika bahlala ngokulokhu bemkhumbula ezinkundleni zokuxhumana uZola 7, beveza nokuthi banesifiso sokumbona ephinda abe nohlelo kwithelevishini.
Izindaba zokuthi akaphilile ziziphathe kabi izakhamuzi zakuleli njengoba kwaziwa nokuthi amaciko ashayekile ngokuvalwa kwemicimbi. Abantu bakuleli babe sebeqala umkhankaso wokulula isandla, bebuyisele kulo mculi owasiza abaningi.
Kube sekuvela nosomathuba abazama ukuqola abantu bezenza lo mculi nabasondelene naye. UZola 7 useqophe i-video eveza ukuthi lokhu akwehli kahle futhi uyafisa bakuyeke nalaba abakwenzayo besebenzisa igama lakhe.
"Ngizohlela ngibe nesikhathi senu nonke kulo nyaka, ngiyazi ukuthi kunanenkinga yemisebenzi kuleli lizwe. Ngicela ninginike isikhashana ngilulame. Kunenkinga, angifuni abantu baniqole. Ngiyezwa ukuthi kunabantu esebezama ukuthi ninikele kubona esikhundleni sami. Sekunama-akhawunti ehlukene, ngizoninikeza iminingwane eqondile namakhasi ezinkundla zami zokuxhumana," kusho uZola 7.
Ube esekhipha imininingwane yasebhange yemenenja yakhe ye-Untamed Communications, uSiki Kunene.
"Uyena kuphela umuntu okhuluma naye noma ngabe nifuna ini. Ngiyanithanda noma ngabe niyasebenza noma anisebenzi," kusho uZola 7. Ube esebonga nabantu abahlukene abalokhu bemeseka, okubalwa nosaziwayo.
IMINININGWANE eqondile neqinisekisiwe yabafuna ukulula isandla kuZola 7